Mmeghe na ntinye nke igwe na-ebugharị igwe eji ebu igwe na-ere | Ding Tai
Mgbapụ Bt igwe
Lastingdị igwe kwụ otu ebe
Igwe eji anwụ anwụ roba
Site na Shodị Shot Benty Machine
H Beam Steel Structure Shot Bired Machine
Igwe eji anwụ anwụ
Agba Shot Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
Mgbanye igwe eji eyi egwu
Mmeghe na ntinye nke igwe na-ebugharị ụdị igwe na-agba ọkụ
Mmeghe na ngwa nke roller pass gbaa ọkụ gbaa igwe
Igwe na-agbapụ mgbọ bụ ụdị teknụzụ ọgwụgwọ iji gbue ájá nchara na igwe nchara n’elu ihe ihe nwere oke ọkụ site na igwe na-agba ọkụ. E jiri ya na teknụzụ ọgwụgwọ ndị ọzọ dị elu, ọ dị ngwa, rụọ ọrụ karịa, ma nwee ike ichebe ma ọ bụ kagbuo usoro nkedo ahụ.
Companieslọ ọrụ ndị America mere igwe mbụ gbagburu ụwa na 1930s. Mmepụta nke China nke ngwa ọgbụgba ọkụ malitere na 1950s, tumadi ịyingomi teknụzụ nke Soviet Union n'oge gara aga.
A nwekwara ike iji igwe na-agbapụ mgbọ iji wepu burrs, akpịrịkpa na nchara nke nwere ike imetụta iguzosi ike n'ezi ihe, ọdịdị, ma ọ bụ nkọwa nke akụkụ ihe. Igwe na-ahụ maka ịgbanyụ ọkụ nwere ike wepu ihe mmerụ ahụ site na mpaghara kpuchie ma weta profaịlụ dị elu nke na-eme ka njikọ ahụ dịkwuo elu iji mee ka ọrụ ahụ sie ike.
Igwe na-agba egbe gbara ọkụ
Igwe na-agba ọkụ dị iche na igwe na-acha ọkụ gbagburu na-eji ya eme ihe n'ihi na ejiri ya belata ike ọgwụgwụ nke akụkụ iji mee ka nrụgide elu dị iche iche, iwelie ike nke akụkụ, ma ọ bụ gbochie nsogbu.
Oke nke ngwa
A na-ebu ụzọ jiri ihe eji agbaji agbaji na - emegharị ụlọ iji wepu elu ájá na akpụkpọ oxide nke nchara nchara.
A ga-agbacharịrị ihe nkedo nchara, ihe nrịbịrị isi awọ, iberibe ígwè, iberibe ígwè na ihe ndị ọzọ. Nke a abụghị naanị iwepu akpụkpọ oxide na ájá n’elu nkedo, kamakwa usoro nkwadebe dị mkpa tupu inyocha ogo nyocha. Dịka ọmụmaatụ, tupu nyocha a na-emebi emebi nke ikuku turbine buru ibu, a ga-emerịrị nhicha ọkụ ọkụ ọkụ iji hụ na ntụkwasị obi nke nsonaazụ nyocha ahụ.
Na mmepụta nkedo izugbe, nhicha ọkụ ọkụ bụ usoro dị mkpa iji chọta ntụpọ dị n'elu dị ka pores n'okpuru, oghere slag, ájá, mkpuchi mkpuchi, peeling na ndị ọzọ.
Nhicha elu nke ihe nkedo a na-achoghi emebi, dika aluminium na ọla kọpa, na mgbakwunye na iwepu akpụkpọ oxide na ịchọpụta ntụpọ nke ihe nkedo, ebumnuche bụ mgbanye ọkụ iji wepu burrs nke ihe nkedo ma nweta ogo elu na njiri mara mma. , iji nweta nsonaazụ zuru oke. N ’imepụta igwe na nchara a na –emepụta ụta ma ọ bụ na - atụtụ ya bụ usoro ma ọ bụ kemịkal maka iwepụ akpụkpọ ahụ iji hụ na ọ na-emepụta nnukwu ígwè.
Na mmepụta nke silicon steel mpempe akwụkwọ, nchara mpempe akwụkwọ na ọzọ alloy metal efere na ibe, ga-afụ ọkụ ma ọ bụ pickling ọgwụgwọ ga-rụrụ mgbe abanyechara na oyi tụgharịa usoro iji hụ na elu ike na ọkpụrụkpụ ziri ezi nke oyi akpọrepu ígwè efere.
Dabere na ntuziaka ike nke igwe ọgbara ọhụrụ, ịba ụba ngbanwe nkwụpụta n’ime metal bụ isi ihe iji bulie ike nke igwe.
Ekwuputala na ogbugbu ịgbanyụ ọkụ bụ ụzọ dị irè iji bulite ihe owuwu. Nke a bụ nnukwu ihe dị mkpa maka akụkụ ụfọdụ nke igwe na - enweghị ike ịgbanwere mgbanwe site na ngbanwe (dịka martensite hardening) ma ọ bụ chọọ nwekwuo ume na ndabere nke ịgbanwee mgbanwe oge.
Ationgbọ elu, ụlọ ọrụ aerospace, ụgbọala, traktọ na akụkụ ndị ọzọ chọrọ ogo ọkụ, mana ihe ntụkwasị obi chọrọ na-aga elu ma dị elu, ihe dị mkpa teknụzụ dị mkpa bụ iji teknụzụ na-agba ọkụ iji meziwanye ike na ike ọgwụgwụ nke mmiri.
Nke9 Huanghai West Road, Dafeng District, Jiangsu Province, China
Eshia, Yurop: ycdtjx@163.com
Afrịka, Oceania: zhihuichen@dingtai-china.com
Yancheng Ding Tai Machines © Ikike niile echekwabara.
Ngwaahịa egosipụtara, Ebe nrụọrụ
gbara igwe Peening, Shot B eburu agha, Mgbapụ Bt igwe, gbagburu spare Parts, Shot Buebi Ebighebi, H beam gbaa ọkụ igwe, Ngwaahịa niile